सुत्केरी बेथा लागेर २० वर्षीया अनरुपा स्वास्थ्यचौकीमा पुगिन, तर आफु पनि संसारबाट बिदा लिईन् पेट भित्रको बच्चाले पनि संसार देख्न पाएन ! – ताजा समाचार
सुत्केरी बेथा लागेर २० वर्षीया अनरुपा स्वास्थ्यचौकीमा पुगिन, तर आफु पनि संसारबाट बिदा लिईन् पेट भित्रको बच्चाले पनि संसार देख्न पाएन !
हुम्लाको सर्केगाड स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूतिका लागि ल्याइएकी एक महिलाको मृ*त्यु भएको छ । बुधबार बिहान प्रसूतिका लागि सर्केगाड स्वास्थ्यचौकीमा भर्ना भएकी वडा नं ४ साँयागाउँ निवासी २० वर्षीया अनरुपा टमटाको बिहान १० बजे मृ*त्यु हो । टमटालाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि बुधबार बिहान ४ बजे प्रसूतिगृहमा ल्याइए पनि दुर्गम क्षेत्रमा उपकरण नहुँदा मृ*त्यु भएको स्वास्थ्यचौकी प्रमुख देवेन्द्रवीर मगियाले जानकारी दिनुभयो ।
मृ*तक टमटालाई बुधबार बिहानबाट एक्कासि सुत्केरी व्यथा लागेसँगै स्वास्थ्यचौकीमा पु¥याइए पनि बच्चा जन्माउन नसक्दा आमा र पेटभित्र रहेको बच्चा दुवैको मृ*त्यु भएको प्रमुख मगियाले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूतिका साधनको कमीले आमा र बच्चा दुवैलाई बचाउन नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।